Sakafo 5 ho an'ny alika misy olana amin'ny hoditra | Alika Manerantany
Anthony Carter | | Fahano alika sy alika kely
Ny hafainganam-piainantsika ankehitriny dia zavatra iray izay mitondra olana ara-pahasalamana ho antsika. Sakafo ratsy, fitantanana ara-pihetseham-po ratsy, fihetsika ratsy rehefa miasa, torimaso kely, ... Ireto ny sasany amin'ireo zavatra ilaozantsika matetika, amin'ny fiainana andavanandron'ny ny fiainana andavanandro be mandany indrindra ... ary ampitainay amin'ny alika ihany koa izany, fahazaran-dratsy rehefa hikarakara ny tenantsika, sy hikarakara azy ireo, hamoaka azy ireo kely, milalao amin'izy ireo ary manome azy ireo sakafo mifototra amin'ny sakafo indostrialy.
Isan'andro mifanesy biraon'ny mpitsabo biby dia feno alika mikorontana ny hoditra, izay mifandraika amin'ny isan-jato betsaka amin'ny sakafo tsy dia tsara, amin'ny ankapobeny dia miorina amin'ny sakafon-tsakafo. Raha tsy misy resaka lavitra dia avelako miaraka amin'ity boky fahandro ity ho an'ny olan'ny alika ny hoditra. Aza adino izany.
1 Manana alika amin'ny hoditra ve ny alikako?
2 Inona no nohanin'ny alikako?
3 Iza amin'ireo sakafo no marina?
3.1 Sakafo ara-pahasalamana mety
3.1.1 Loharano proteinina fototra
3.1.2 Sakafo tsy voavaha
4 Ary ny sakafo ho an'ny olan'ny allergy izay eny an-tsena?
4.1 Fahano ny olan'ny hoditra
5 Ahoana no ahafantarako raha tsy mahazaka sakafo ny alikako?
5.1 Ny marina momba ny fitsapana ny allergy
5.2 Ahoana no hahalalana raha mandeha ny sakafo?
6 Fa inona no hanomezako sakafo azy? Nilaza ny mpitsabo biby fa ratsy ho an'ny alikako ny sakafo voajanahary
7 Resety sakafo alika
7.1 Alohan'ny handrahoana sakafo
7.2 Bitro misy ovy masaka
7.3 Omby sy ovy ho an'ny alika olon-dehibe
7.4 Bitro sy vary nandrahoina ho an'ny alika olon-dehibe
7.5 Venison sy sakafom-bary nandrahoina ho an'ny alika olon-dehibe
7.6 Mitombo ny bitro sy ovy ho an'ny alika
Manana alika amin'ny hoditra ve ny alikako?
Ny aretin-koditra no olana mahazatra indrindra tsaboin'ny mpitsabo vavy. Amin'ny faritra maro eto amin'ity firenena ity, izy ireo dia misolo tena ny 50% amin'ny biby rehetra tonga mba halaina hevitra, ary hatramin'ny 70% amin'ireo olana ara-dermatolojika ireo dia vokatry ny fihenan-tsakafo. Tamin'ny lahatsoratra teo aloha, alika sy adin-tsaina, Azavaiko fa ny fitazonana ny sakafonao alika mandritra ny androm-piainany dia loharano lehibe iray ateraky ny ain'ny alika.
Inona no nohanin'ny alikako?
Fikarohana veterinera maro manerantany no mampiseho izany ny antony mahatonga ny ankamaroan'ny olan'ny hoditra amin'ny alikanay dia entanin'ny sakafo indostrialy na sakafo ho an'ny alika. Ny tsy fahampian-tsakafo dia antony iray, noho ny tsy fahampian'ny otrikaina toy ny zinc, vitamina A, vitamina B, vitamina E, proteinina na asidra matavy sasany, izay alika amin'ny alikaola fotsiny no ampiasana ny alikantsika.
Na izany aza, ny tsy fahampian-tsakafo sy ny tsy fahazakan-tsakafo dia mety ho antony mahatonga ny aretina noho ny tsy fahampian-tsakafo. Izany rehetra izany dia vokatry ny additives be dia be sy fitambarana simika amin'ny karazany rehetra izay ananan'ireto sakafo indostrialy ireto dia manankarena ary mampihena ny hery fiarovan'ny alika ny alikaola rehefa mila manodina azy io. Tamin'ny lahatsoratra teo aloha, ao amin'ny Tantaran'ny indostrian'ny sakafon'ny biby, Azavao ny fomba fiasan'ny indostria ary omeko anao ny lisitry ny additives sy ny compound izay anaovany azy.
Iza amin'ireo sakafo no marina?
Sakafo ara-pahasalamana mety
Loharano proteinina fototra
Ny sakafo voafehy dia fitsaboana maharitra ihany azo ekena ho an'ny allergy amin'ny sakafo izay miteraka aretin-koditra. Ny sakafo voafehy dia heverina ho mandanjalanja sy tsy misy alègenera, ary izy ireo dia amboarina miaraka amin'ireo akora azo zakaina tsy misy olan'ny alika. Ny fandinihana sasany dia mampiseho fa misy ny sakafo izay tsy dia mahazaka allergy amin'ny biby toy ny zanak'ondry, akoho, henan-tsoavaly, venison ary bitro, satria tsy dia hita amin'ny sakafo ara-barotra izy ireo amin'ny ankapobeny.
Sakafo tsy voavaha
Ny tsy fahampian'ny fikarakarana ireo sakafo ireo, mahatonga azy ireo tsy dia hahazo valiny mahazaka. Ny iray amin'ireo loharanom-proteinina ireo dia atambatra amin'ny vary na ovy nandrahoina mba hananganana ny sakafo izay ho sakafo (tsy misy zavatra hafa), mandritra ny telo herinandro farafaharatsiny. Betsaka ny sakafo fitantanana aretina gastrointestinal azo ampiasaina amin'ny aretin-koditra. Indraindray ny mangidihidy dia mitohy amam-bolana aorian'ny famafana ny sakafo amin'ny sakafo isan'andro. Tsara kokoa ny mitazona ny sakafo mandritra ny 3 volana farafahakeliny, alohan'ny hanatsoahan-kevitra momba ny antony mahatonga ilay mangidihidy.
Ary ny sakafo ho an'ny olan'ny allergy izay eny an-tsena?
Fahano ny olan'ny hoditra
Betsaka ny sakafo ara-barotra azo ampiasaina amin'ny fitsaboana aretin-kozatra amin'ny sakafo. ny zanak'ondry sy vary amin'ny ankapobeny no akora fototra amin'ity karazana sakafo ity. Mazava ho azy, noho ny fanodinana be loatra izay nanovana azy ireo ho lasa endrika maina amin'ny sakafo indostrialy fantatray fa mety tsy dia mandaitra loatra amin'ny fitsaboana ny aretin'alikao.
Matetika dia hanjavona ny aretin-koditra sy ny mangidihidy vokatry ny tsy fahazakan-tsakafo rehefa manomboka mihinana zanak'ondry sy vary amin'ny alika BARF efa vonona ny alika. Imbetsaka dia miverina ny olan'ny hoditra rehefa fihinanan-tsakafo zanak'ondry sy vary voaomana ara-barotra. Ankoatry ny vitamina sy mineraly syntetika, ireo sakafo ireo dia tsy misy karazana otrikaina hafa. Ny sakafo ara-barotra dia misy mpameno, additives ary preservatives izay mety tompon'andraikitra amin'ny famerenan'ny aretin-koditry ny alika amin'ny biby.
Ny biby dia mety tsy mahazaka karazana fanomanana indostrialy hafa laniny, toy ny kilalao (mitandrema manokana amin'ny kilalao mora vidy avy amin'ny magazay sinoa), vatomamy, na fiomanana amin'ny famatsiana vitamina sy mineraly. Ny fanomanana vitamina sy mineraly dia misy vokatra hena sy zavatra ampiana izay mety tsy mahazaka biby ny olona. Matetika mipoitra ny famantarana ny allergy rehefa ampiana pilina vitamina sy mineraly miorina amin'ny biby mba handanjalanja ny sakafo voafehy.
Ahoana no ahafantarako raha tsy mahazaka sakafo ny alikako?
Ny marina momba ny fitsapana ny allergy
Avelako eto ny hevitry ny Doctor of Medicine Veterinary, Donald Strombeck (iray amin'ireo fikambanana lehibe indrindra amin'ny sakafo mahavelona canine) momba an'io lohahevitra io:
Mety ho sarotra ny manaporofo ny famaritana ny mahazaka sakafo. Tsy misy fitsapana laboratoara azo antoka tanteraka hanamafisana ny tsy fahampian-tsakafo ho antony mahatonga ny gastrointestinal na aretin-koditra. Ny fitsapana ny hoditra intradermal dia matetika ampiasaina hamantarana ireo tsy fahampian-tsakafo isan-karazany amin'ny antony mahatonga ny aretin-koditra, na izany aza, tsy nisy fanadihadiana nanaporofo fa azo antoka ny fitsapana ny alègien-tsakafo. Ity fitsapana ity dia mazàna dia mamokatra fihetsika miabo tsy marina izay manasongadina ny fisian'ny allergy amin'ny sakafo.
Imbetsaka aho no nahita fa nandany vola an'arivony euro ny olona tamin'ny fitsapana ny alika tamin'ny alikany ary tsy nahazo na inona na inona izy, raha nanohy nanome azy sakafo indostrialy tamin'ny baolina maina.
Doctor Strombeck dia milaza amintsika momba ireo fitsapana:
Ny fitsapana alikaola amin'ny sakafo dia mety misy koa ny fanandramana radioallergoadsorption (RAST) sy ny famakafakana ny hery fiarovana (ELISA) mifandray amin'ny anzima. Ireo fitsapana ireo dia mahatsikaritra fanoherana manokana manohitra ny tsimok'aretina manokana, eto ireo tsy mahazaka sakafo. Tsy misy fandalinana amin'ny alika sy saka mampiseho hasina ireo fitsapana ireo. Olana amin'ny hoditra mitaiza maro no manombana amin'ny fitsapana ny ra sy ny biopsy amin'ny hoditra. Ny isa feno amin'ny ra sy ny tontolon'ny simia ao amin'ny ra dia manome fampahalalana kely ilaina amin'ny famaritana ny tsy fahazakana na tsy fahazakana.
Ahoana no hahalalana raha mandeha ny sakafo?
Araka ny filazan'ny Doctor Strombeck
Ny akora simika rehetra dia mivoaka raha tsy aorian'ny fifandraisan'ny leukosittes amin'ny alergen sakafo. Rehefa lasa ny alergen dia mijanona ny famotsorana ireo akora simika ireo.
Indraindray ireo kemika dia mitohy miseho ho azy tsy misy alergen. Indraindray io famotsorana simika tampoka io dia mety haharitra amam-bolana maro alohan'ny hijanonany sy hijanonany. Amin'ireny tranga ireny, ny biby dia mety hanohy mampiseho famantarana ara-pahasalamana ny allergy na dia tsy eo aza ny fihinan-kanina. Amin'ity karazana tranga ity dia mora ny manjavozavo ary mino fa tsy nahomby ilay fitsaboana na tsy hita ilay tohotra alim-borona ary tsy fantatra intsony. Zava-dehibe ny faharetana rehefa mametraka fitsaboana amin'ny sakafo amin'ny biby tsy mahazaka sakafo.
Fa inona no hanomezako sakafo azy? Nilaza ny mpitsabo biby fa ratsy ho an'ny alikako ny sakafo voajanahary
Tombontsoa ny alikako. Manana sakafo matsilo kokoa izy ireo noho ny an'ny mpanjaka, ary mandany ampahany kely amin'ny fotoako sy ny volako fotsiny izany. Manondro anao ny vavahady aho Torolàlana momba ny famahanana kanine. Ho hitanao eo izay mahasoa anao sy izay tsy.
Isan'andro mifanesy, fiofanana momba ny sakafo kaninina avy amin'ny mpitsabo biby Izay vao nandao ny hazakazaka, tsy azo ampiasaina, miaraka amin'ny famantaranana marika sy famelabelaran-kevitra maimaimpoana amin'ny famaritana azy ireo ny marika fahana ary izy ireo ihany no mivarotra an'io karazan-tsakafo io, satria azontsika an-tsaina sahady ilay sary iray manontolo.
Ny alika iray dia manana fitoviana iraisana 99% amin'ny amboadia. Azonao an-tsaina ve ny amboadia marary noho ny fihinanana serfa iray manontolo, tafiditra ao ny taolana? Ny lozika dia mamela fisalasalana kely satria raha ny sakafo lehibe amin'ny sakafony isan'andro no naharary azy ireo dia ho faty izy ireo taonjato maro lasa izay. Ny sakafo voajanahary dia azo antoka kokoa noho ny sakafo mifototra amin'ny sakafo tsy tsara kalitao.
Ny alika dia manana olana bebe kokoa ateraky ny famahanana, izay karazan-tsakafo efa zato taona indrindra ary feno akora simika ary tsy ampy otrikaina, noho ny sakafo ara-pahasalamana, miorina amin'ny sakafo voajanahary, ary ny afaka tsy voarindra azo atao.
Sakafo isan-karazany sy voajanahary dia hiteraka alika salama ary tsy misy fisalasalana fa kely dia kely ny vintana hananana olana amin'ny hoditra mifandraika amin'ny allergy sakafo, toy izay omena pellet feed. Ary raha milaza aminao ny mpitsabo anao fa ratsy ny sakafo voajanahary, dia anontanio izy inona no haniny.
Resety sakafo alika
Alohan'ny handrahoana sakafo
Ireo resipeo ireo dia novolavolain'i Doctor Strombeck, ao amin'ny bokiny Sakafo alika sy saka voaomana an-trano: ny safidy mahasalama, nadika sy novaina ho an'ny besinimaro Espaniola aho.
Ireo sakafo rehetra ireo novolavolaina hitsaboana ny olan'ny hoditra ny alika, ateraky ny tsy fahampian-tsakafo, ary tonga miaraka amin'ny fampahalalana momba ny sakafo mifanaraka amin'izany ho an'ny alika.
Alohan'ny hanombohana mahandro dia tsara ny mahatadidy izany ny hena dia homena manta ary miaraka amin'ny taolana amin'ny resipeo rehetra, raha mbola biby kely. Raha henan'omby, zanak'ondry, soavaly na omby dia tsara kokoa ny manala ny taolana ary avelao ho taolana fialamboly. Izy ireo koa dia mahazo otrikaina amin'izany hetsika izany.
Raha tsy te hanome azy taolana voajanahary ianao, dia azonao atao ny manampy ny sakafo taolana ho famenon-tsakafo
Bitro misy ovy masaka
Bitro vaovao 250.
Ovy 300gr nahandro tamin'ny hoditra sy ny zavatra rehetra.
Broccoli na laisoa 60gr.
Menaka oliva 10gr
Masira 3 miligrama
Sakafo taolana vovoka 3 gr (tsy voatery raha tsy omenao taolana)
1/5 takelaka vitamina sy mineraly marobe (natao ho an'ny olon-dehibe)
Ity sakafo ity dia manome 647 Kcalories, proteinina 29,3gr, ary manome tavy 17,6gr, hanarona ny filan'ny alika antonony (20 kilao eo ho eo)
Azonao atao ny mahandro ny bitro raha tianao, andrahoina na endasina mandritra ny 3 minitra. Hahatonga azy io ho mora levona kokoa io ary hampiakatra kely ny kaloria.
Manaova fangaro nokapohina malefaka miaraka amin'ny legioma, sira, vitamina ary taolana vovoka (raha ilaina), izany no saosy ho an'ny bitro sy ovy.
Omby sy ovy ho an'ny alika olon-dehibe
250gr an'ny voaly vaovao.
Ity sakafo ity dia manome 656 Kcalories, proteinina 35,7gr, ary tavy 15,7gr, ho an'ny mahafeno ny filan'ny alika antonony (20 kilao eo ho eo) isan'andro. Aroso tsara mba tsy ho noana ianao.
Afaka mahandro ny hena ianao raha tianao, endasina mandritra ny 3 minitra. Hahatonga azy io ho mora levona kokoa io ary hampiakatra kely ny kaloria.
Manaova fangaro nokapohina malefaka miaraka amin'ny legioma, ny sira, ny vitamina ary ny taolana vovoka (raha ilaina), dia izany no saosy ho an'ny zanak'omby sy ovy.
Bitro sy vary nandrahoina ho an'ny alika olon-dehibe
Bitro vaovao 250gr.
Vary fotsy 320 gr.
Ity sakafo ity dia manome 651 Kcalories, proteinina 29,2 g, ary tavy 18,2 g, mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny alika antonony (20 kilao) azonao atao ny mahandro ny bitro raha tianao, mahandro azy na manaova azy mandritra ny 3 minitra , na dia izany aza, araka ny efa nambarako teo aloha, dia hampiakatra ny fatran'ny kaloria anananao.
Ny vary dia tsara kokoa raha ao anaty rano vetivety dia avelao ho lasa amin'ny fanaovana izany, izany hoe, mahandro azy io loatra, ka mihalefaka kokoa. Amin'ity fomba ity dia ho mora levona ho an'ny biby izy.
Manaova fangaro nokapohina malefaka miaraka amin'ny legioma, sira, vitamina ary taolana vovoka (raha ilaina), izany no saosy ho an'ny bitro sy ny vary.
Venison sy sakafom-bary nandrahoina ho an'ny alika olon-dehibe
150gr an'i Venison.
Ity sakafo ity dia manome 651 Kcalories, proteinina 29,2gr, ary manome tavy 18,2gr, hamaly ny filan'ny alika antonony (20 kilao). Afaka mahandro ianao raha maniry ny hazandrano, friendolo na ao anaty lafaoro mandritra ny 3 minitra, na dia izany aza, araka ny efa nambarako teo aloha, dia hampitombo ny fatran'ny kaloria ao aminy.
Ny vary dia tsara kokoa raha ao anaty rano vetivety dia avelao ho lasa rehefa manao azy, izany hoe mahandro azy bebe kokoa, mba ho malemy kokoa. Amin'ity fomba ity dia ho mora levona ho an'ny biby izy.
Mitombo ny bitro sy ovy ho an'ny alika
Bitro vaovao 200.
Ovy 250gr nahandro tamin'ny hoditra sy ny zavatra rehetra.
Ity sakafo ity dia manome 511 Kcalories, proteinina 24,6gr, ary tavy 17,6gr, hamaly ny filan'ny a alika kely alika antonony.
Toy ny mahazatra, manaova fangaro nokaravasina miaraka amin'ny legioma, ny sira, ny vitamina ary ny vovo-taolana (raha ilaina), izany no saosy ho an'ny bitro sy ovy.
Navelako anao ny torohevitra momba ny fandrahoan-tsakafo, amin'ny tsirairay amin'izy ireo. Araho izy ireo raha ny amin'ny fanaovana sakafo mifanaraka amin'ny alikanao. Very ny tahotra ny hanome azy ny hena miaraka amin'ny taolana, manta daholo. Raha biby kely izy ireo dia tsy misy zavatra mitranga. Tsy tsara ny manome ny taolana lohalika zanak'omby, na eo aza ny taolan'akoho, bitro na patsa, dia tsy hanana olana izy io ary ho be otrikaina.
Azonao atao foana ny mameno ireo resipeo ireo miaraka amin'ny yaourt voajanahary na grika, raha azo atao raha tsy misy siramamy. Raha te-hamy kely azy ianao dia tsy misy mamy sy mahasalama kokoa noho ny tantely, raha novidiana tamina mpamonjy voina sy voajanahary, tsara kokoa noho ny tsara kokoa.
Raha tsy misy resaka lavitra dia misaotra betsaka anao namaky ahy ary raha manana fanontaniana ianao dia faly aho manampy anao. Avelao amiko ireo ao amin'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity.
Miarahaba sy mikarakara ny alikanao !!!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fahano alika sy alika kely » Sakafo ho an'ny olan'ny hoditra amin'ny alika
Alajandra Tint dia hoy izy:
Tiako ireo lahatsoratra amin'ity pejy ity, tena ilaina sy mahaliana izy ireo 😀
Valiny tamin'i Alajandra Matiz
Salama Alajandra, misaotra betsaka tamin'ny hevitrao. Mirary ny soa indrindra
Louis S. dia hoy izy:
Miarahaba an'Andriamatoa Antonio Carretero. Miarahaba anao amin'ny lahatsoratrao. Izaho dia veterinera, nahazo diplaoma 21 taona lasa izay, natokana mazava ho an'ny fiompiana akoho amam-borona, noho izany ny maha-akaiky ahy ireo zavamaniry famahanana biby mifantoka. Manana 4 taona aho nandinika ny zava-drehetra momba ny sakafo kaninina, ary 2 taona nampihatra ny fahalalana azo (sakafo an-trano voalanjalanja), ny fiovana tsara dia mihoatra lavitra noho ny mahatalanjona. Manantena aho fa hahatratra olona maro izay tia ny alik'izy ireo ny lahatsoratrao, ary manampy azy ireo hanokatra ny masony, amin'ny aretina maro be izay miseho akaiky, mazava ho azy amin'ny fisehoan'ny sakafo maina (mifantoka). Hotahian'andriamanitra anie ianao.
Valiny tamin'i Luis S
Salama Luis S. Misaotra betsaka tamin'ny hevitrao sy ny fandraisanao anjara. Fahafinaretana afaka manampy antsika rehetra hanana alika tsara kokoa.
Antonio !! Miarahaba anao! Mitady fampahalalana momba ny sakafo voajanahary aho nahita ny lahatsoratranao… Misy toro-hevitra na sakafo an-trano ho an'ny alika izay manana olana amin'ny allergy amin'ny hoditra? Misaotra !!!!
Gi dia hoy izy:
Misaotra betsaka anao nizara an'ity fampahalalana tena mahasoa ity !!
Fisalasalana;: «1/5 takelaka misy vitamina sy mineraly marobe» ny fikajiana (1/5) dia tena mitombina .., mety ho voafaritra kokoa ve ianao?
Mamaly an'i Gi
Salama Antonio, manana volamena volamena efa 3 taona aho izay misy hoditra atopika sy allergy (tongotra sy sofina). Tsy fantatro hoe inona no mahazaka azy, ary andefasan'izy ireo sakafo atopika aho, saingy lafo be io ary tsy zakako izao. Azonao atao ve ny manolotra sakafo an-trano ho ahy hanatsara ahy? Izy io dia tena manana fotoana mahatsiravina.
Mamaly an'i Toñy
Oh ... maro amin'ireo fomba fahandro no ahitana bitro.
Fony mbola zaza aho dia nanana zazakely kely. Tsy afaka mamahana ny bitro alika aho. miala tsiny indrindra…
Salama Antonio, misaotra amin'ny torohevitrao sy ny fomba fahandro anao.Ny fanontaniako dia inona no tianao holazaina amin'ny takelaka 1/5, ampahadimin'ny takelaka ve io sa takelaka iray ka hatramin'ny dimy? Misaotra anao.
Manana Maltese 7 taona aho izay voan'ny aretin-kozatra sakafo izay miseho miaraka amin'ny gingivitis miverimberina, izay mahatonga azy hihinana antibiotika matetika noho ny faniriako ary tiako ho fantatra raha misy sakafo afaka manampy azy
macarena dia hoy izy:
Salama ny alikako mampiahiahy fa tsy haiko hoe .. 4 taona izy ary nomeko azy ny fahana niseho tamin'ny fahitalavitra marika farany .. akoho io sa miankina io fa apetrany ny vodinny ambaratonga .. mangidihidy sy manaikitra, Ary mivadika mavokely ny kibo, mpanao divay miaraka amin'i yorsay ... Nomeko azy ny sakafo eritreretiko fa ny salmon marika kilao fa mazava ho azy indraindray te-hanome zavatra hafa amin'ity andro satria mandray fety aho ary tsy fantatro izay tokony hanome azy fahasoavana betsaka dia miandry ny valinteninao aho.
Mamaly an'i macarena
alba sophia dia hoy izy:
Misaotra anao nizara ny fahalalanao, hanomboka hampihatra ny toro-hevitrao rehetra aho, manana alik'alika manana olana amin'ny hoditra aho
Valio i Alba sofia
Marlene dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara, ahafahako mahazo fahalalana momba ny fahamarinan'ny sakafo sy ny sakafo ara-dalàna ho an'ny canine.
Valiny tamin'i Marlene
Salama Antonio, tena tiako ny lahatsoratrao sy ny fomba ilazanao ny filàn'ny alikanay, manana fanontaniana aho: ny vola apetrakao dia latabatra ary homena azy telo isan'andro ve? Na raha azonao atao ny manazava azy, misaotra betsaka, antenaiko fa hamaky bebe kokoa momba ny fahasalaman'ny spaniel mpiompy ahy izay niaraka tamina alika kely manerana ny vatany nandritra ny herintaona izao, manana fotoana tena ratsy izy, ity otitis ity dia mijaly betsaka ny mahita raha omeko azy io sakafo io, arahabaona.
Salama, rahampitso tolakandro.
Manana American Bully mahazatra aho ary milanja 37 kilao, manana izy
Telo taona, fony izy efa-bolana, nanomboka tamin'ny olana tamin'ny rantsan-tànany sy ny sofiny izy, teo amin'ny rantsan-tànany dia nivoaka toy ny pupae izy ireo, ary voan'ny otrikaretina, ... nandefa antibiotika ho azy ny mpitsabo ary izany no nesoriny avy aminy.
Nanova sakafo hatrany izahay ary mitohy ny olana.
Ny fanontaniako… .Ny vola apetrakao dia iray andro?
Salama, rahampitso hariva… .ny alikako izay alika rano Espaniôla tamin'ny naha tompon-dakan'i La Rioja azy izao satria mikororosy sy misintona ny volony izy, noho ny haavo somary mena mahazo ny vatany ary mihintsana ny hoditra. manana volo tena marokoroko ny valahany ary avy amin'ny taolan-tehezany miakatra tsara tarehy .... efa kivy be aho tsy hitako izay hatao ... misaotra
Valiny tamin'i Miriam
manantena grajales dia hoy izy:
misaotra amin'ny torohevitra ny alikako dia 10 taona fa manana olana amin'ny hoditra izy, ahoana no ahafantarako raha hanao izany aho
manome ny habetsaky ny otrikaina rehefa manomana sakafo an-trano nody misaotra.
Valiny tamin'i Esperanza Grajales
Salama!! Fakan-kevitra manana alika maranitra misy alikaola amin'ny sakafo aho, efa 1 taona sy tapany izy, mihinana hypollargenico mpanjaka kaninina, nanoro hevitra ahy ny mpitsabo biby mba hahandro henan-tsoavaly miaraka amin'ny voatavo italianina, noana izy, angamba omeko kely I te-hitarika ahy izy. Misaotra.
Ahoana ny fiasan'ny microchip ho an'ny alika?
Ny tombony azo amin'ny fiainana alika mandritra ny fitondrana vohoka